Ngisusa kanjani noma ngisebenzise i-akhawunti yami ye-Pinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
May 12, 2021 0 Comentarios 586
Iningi labantu lingenza inqubo yokufuna ukususa i-akhawunti ye-Pinterest noma ukuyenza ingasebenzi ukuze ithole imiphumela engcono uma kukhulunywa ngokuthola imiphumela engcono. Mhlawumbe abantu abaningi bazozibuza ukuthi kungani kungaba ngumqondo omuhle gqugquzela ukwenziwa kungasebenzi kwe-akhawunti.
Ukukwazi ukususa noma ukuvula i-akhawunti kuyinto enhle kakhulu enikeza abantu umoya wezokuxhumana noma banyamalale ngenxa yokuphazamiseka. Lokhu ngokungangabazeki kuwumqondo odlula kude wokubalekela umphakathi wedijithali futhi wakhe imibono engcono esinikeza imiphumela emangalisayo.
Akunakwenzeka ukufuna ukulungisa zonke izimo ezikwi-intanethi futhi uzizwe ukhathele yimimoya emibi engabangelwa abantu. Noma kunjalo, kungenzeka kakhulu ukuthi ku- I-Pinterest izokwenza okuphambene, kepha ngasikhathi sinye kuthatha isikhathi sakho ukubuka izikhonkwane nokuthunyelwe okuthakazelisayo.
Izizathu zokukhubaza iPinterest
Abanye abantu bathi uthando lwabo ngezingosi zokuxhumana nabantu ludlulela ngaphezu kwazo zonke izinto ezingenzeka. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi umqondo omuhle ukwazi ukumisa usuku nosuku futhi hlala ukhululekile kulokho okwenzeka emhlabeni wedijithali.
Izikhathi eziningi siyakhohlwa ukuthi iminyaka yedijithali imane nje, yize ihlanganisa imisebenzi engama-90% namuhla, kuhle futhi nokubheka okukhona emhlabeni wangempela. Phuma uxoxe nabangani, wenze imisebenzi engadala ukuphazamiseka kubasebenzisi, iphromothe amaphrojekthi wokudala, njll.
Ngakho-ke, ngezansi uzobona izizathu zokuthi kungani i-akhawunti ye-Pinterest ingasebenzi noma isusiwe Njengamanje.
Kwesinye isikhathi sithatha iPinterest noma elinye ikhasi njengemiyuziyamu yemibono, futhi empeleni izinsuku zethu nempilo yethu ngaphakathi kwepulatifomu iyaqhubeka. Umqondo omuhle ukuthatha umoya futhi ubhekane nakho konke okungahambanga kahle ngesikhathi esihleliwe.
Imibono ehlelwe kabi
Abantu bavame ukukholelwa ukuthi ngoba umbono awuhambanga njengokuhlelile, kungcono ukuthi uhlale uzama. Mhlawumbe kwesinye isikhathi kungumbono omuhle kakhulu, kepha futhi kuhle khululeka futhi ucabange ngekhanda elipholile kwenzekani, ngoba lokhu ungavimbela ama-akhawunti okwesikhashana.
Njengoba kunikezwe izizathu ezibalulwe ngenhla, umqondo omuhle ukulandela izinyathelo ezizophakanyiswa ukuthola imiphumela engcono.
Kufanele uchofoze isithonjana samaphoyinti amathathu
Kuyadingeka ukukhetha inketho ye: "izilungiselelo"
Isikhathi sokufaka izilungiselelo ze-akhawunti
Khetha ithebhu: "ukwenziwa kungasebenzi kwe-akhawunti"
Ngesikhathi sokwenza lezi zinyathelo, ipulatifomu izocela izincazelo zokuthi kungani uzothatha ikhefu. Ungabeka ini ufuna ukwabelana ekhasini.
Ngakolunye uhlangothi, ukususa i-akhawunti eshiwo kungenzeka ukuthi ukwenze ngezinyathelo ezifanayo ezibalulwe ngenhla. Kepha lesi sinqumo sibaluleke kakhulu ukusithatha ngakho-ke kufanele senziwe ngokuzibophezela.
1 Izizathu zokukhubaza iPinterest
1.1 Ukungabi nesikhathi
1.2 Imibono ehlelwe kabi
2 Ngisusa noma ngicishe kanjani i-akhawunti yami ye-Pinterest?